अवैध पैसाका हिसाव नमिल्दा 'विप्लव-प्रकाण्ड' सम्वन्धमा खाडल | Citizen Post News
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) का कारण पार्टीभित्र ठूलो विवाद भएको छ । चन्दा, अपहरण, बम आतंकलगायतका आरोपमा पक्राउ परेर झण्डै महिनौं थुनामा बसेका प्रकाण्डले अहिले चन्दा आतंक मच्चाउन थालेको बताइन्छ ।
टेकु प्रहरीमा रहेका बेला प्रकाण्डलाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेका थिए । भेटका बेला भट्टराईले प्रकाण्डलाई खानपिनका लागि भनेर दश हजार दिएको नेकपाका एक नेताले बताए । भट्टराईले प्रकाण्डलाई दश हजार दिएको सूचना पाएपछि विप्लवले किन पैसा लिएको ? भन्दै हकारेको स्रोतले जनायो । अवैध रुपमा चन्दा उठाएर ठूला व्यापारीहरूलाई आजित बनाएका प्रकाण्डले फेरि पनि चन्दा आतंक चलाउन प्रहरीलाई सूचना प्राप्त हुन थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार आफ्ना निकटका केही नेताहरूलाई उठ्न बाँकी चन्दा उठाउन निर्देशन दिएका छन् । गृहजिल्ला जाजरकोट पुगेका प्रकाण्डले करोडौं रुपियाँ चन्दावापत उठाइसकेका छन् । उनले चन्दाको बास्तविक हिसाव किताव विप्लवलाई नदिने गरेको एक नेताले बताए । चन्दाको पैसाकै कारण विप्लव र प्रकाण्डबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
विप्लवले प्रकाण्डसँग हिसावकिताव माग गर्दै आए पनि प्रकाण्डले विभिन्न बहाना बनाएर छल्दै आएको आरोप छ । चन्दाकै पैसाको हिसाव किताव माग गर्न थालेपछि प्रकाण्डले विप्लवलाई धम्काउन जनवर्गीय संगठनहरूमा आफू निकटका नेताहरूलाई राखेर समानान्तर संगठन बनाएको आरोप पनि छ । प्रकाण्डमा सुधार नभए विप्लवले कारबाही गरेर पार्टीबाट निस्काशन गर्नेसम्मको योजना बनाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।